Taliyaha ciidamada bada Turkiga oo ku sugan Muqdisho iyo maraakiib dagaal oo kusoo xirtay dekedda Muqdisho |
Taliyaha ciidamada bada Turkiga oo ku sugan Muqdisho iyo maraakiib dagaal oo kusoo xirtay dekedda Muqdisho
Muqdisho (Somalimedia) buy Gold Vigra, cheap Zoloft. – Magaalada Muqdisho waxaa maanta oo Khamiis ah soo gaaray wafdi saraakiil ah oo uu hoggaaminaayo taliyaha ciidamada bada dalka Turkiga.
Wafdiga ayaa kulamo kula qaatay wasaaradda gaashandhigga wasiirka difaaca, taliyaha ciidamada xoogga , abaandulaha iyo taliyaha ciidamada badda Soomaaliyeed.
Waxay ka hadlay siddii loo xoojin lahaa xiriirka dhinaca ciidan ee ka dhexeeya labada dal iyo siddii uu iskaashi u dhexmari lahaa.
Taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed, Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indho-Qasho ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin booqashada ay Muqdisho ku joogaan saraakiisha ka socda dowladda Turkiga.
Booqashada ay ku yimaadeen maanta saraakiisha ka socda dowladda Turkiga ayaa daba socota iyadoo dhawaan dalka Turkiga uu booqasho ku tagay taliyaha ciidamada bada Soomaaliya Admiral Madeey Nuur Ufurow.
Sidoo kale Afar ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dalka Turkiga, ayaa maanta waxay ku soo xirteen Dekeda Magaalada Muqdisho, iyadoo ay la socdeen cutubyo ka tirsan Ciidamada Badda ee Turkiga.
Maraakiibtaan, ayaa waxay sideen deeq daawo ah oo uu Turkigu ugu talla galay in loogu adeego isbitaalada uu ka hirgeliyay Magaalada Muqdisho, iyadoo daawooyinkaan lagu sheegay mid si gaar ah kaga timid Ciidamada Badda ee Turkiga.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Dekeda Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu si weyn Turkigu ugu ammaanay taageeradiisa ku aadan Somaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa Ciidamada Badda ee Turkiga ka gudoomay deeqda daawada ah, ee ay ugu talla galeen in wax loogu qabto shacabka Somaliyeed, kuwooda xanuunsanaaya.
Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu tilmaamay in tani ay sii xoojineyso kalsoonida iyo xiriirka walaaltinimada leh, ee labada dalka, isla-markaana ay kaga mahadcelinayaan.
Si kastaba, xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa hadda u muuqda mid sii xoogeesanaya, waxaana dowladda Turkiga ay noqotay dowladda kaliye ee si muuqata wax uga qabatay horrumarka caasimada Muqdisho oo ku dhawaad 25-sanno dagaallo wajiyo badan leh ay ka socdeen.